मोटोपना घटाउँन चाहनु हुन्छ भने नगर्नुहोस् यस्ता तरकारीको सेवन ! – Gandaki Chhadke
मोटोपना घटाउँन चाहनु हुन्छ भने नगर्नुहोस् यस्ता तरकारीको सेवन !
By गण्डकी छड्के On Dec 25, 2020
मोटोपनाले थुप्रै रोगहरु निम्त्याउँनुका साथै मानिसको सुन्दरतामा पनि असर गर्छ । मोटोपना घटाउँनको लागि बोसो घटाउँन जरूरी हुन्छ जसको लागि बोसो बढाउँने खाने कुरा जस्तै केहि तरकारीहरू तुरुन्तै छोड्न आवश्यक हुन्छ । तरकारी हाम्रो स्वास्थको लागि निकै महत्वपूर्ण र स्वस्थ चिज हो तर केहि तरकारीहरूले मोटोपना बढाउँन मद्दत गर्छ । यस्ता तरकारीको सेवनले रगतमा सुगरको मात्रा बढी हुन्छ जसले गर्दा धेरै भोक लाग्छ ।केही तरकारीहरूलमा धेरै मात्रामा स्टार्च हुन्छ, जसको कारण हाम्रो शरीरले ती खानेकुरालाई पचाउँन त सक्छ तर यो अतिरिक्त चिनी फ्याटमा परिणत हुन्छ। जसले गर्दा मोटोपना बढ्छ ।
१.’फ्राईड’ तरकारी :वजन नियन्त्रण गर्नको लागि सर्वप्रथम आलु चिप्स, फ्रेन्च फाई, अनियन रिङ, हरियो टमाटर र भिंडी छोड्नु आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै, फ्राई गरिएको खाना र फ्राई तरकारीहरू पनि थोरै खानुपर्छ । किनभने फ्राईड खाना खाँदा पेट लाग्छ ।२.काउली :काउली , ब्रसेल्स स्प्राउट्स र ब्रोक्ली स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हुन्छन्, तर यिनीहरुको धेरै सेवन गर्नाले छिट्टै वजन बढ्न सक्छ। त्यसैले अधिक काउली र बन्दाको तरकारी सेवन गर्न कम गर्नु पर्छ। धेरै काउलीको सेवनले पेटमा ग्यासको समस्या पनि देखा पर्न सक्छ ।
३. प्याकिंग गरिएको सलाद:सँधै प्याक गरिएको सलाद सेवन गर्नु हुँदैन। किनभने प्याक गरिएको सलादमा धेरै प्रकारका तरकारीहरू समावेश हुन्छ र ट्रान्स फ्याटको उच्च मात्राको कारण, वजन छिटो बढ्न थाल्छ। ४. आलु: आलुमा अत्याधिक मात्रामा स्टार्च उपलब्ध हुन्छ, जसको कारण आलुको धेरै सेवन गर्नाले वजन बढ्न सुरु हुन्छ । त्यसैले, आलु धेरै खानु वजन बढ्नुको मुख्य कारण बन्छ ।
चिसो माैसमलाई चुनाैतीः अदिति बुढाथोकीको हट अवतार, हेर्नुहोस् तस्बिर